Daawo Sawirada Cayaartoyda Xulka Soomaaliya oo si aan Caadi ahayn Muqdisho loogu soo dhaweeyey | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Cayaartoyda Xulka Soomaaliya oo si aan Caadi ahayn Muqdisho loogu soo dhaweeyey
(01-05-2018) Xulka guuleystay ee kubada cagta dalka Soomaaliya ee da’doodu ka yartahay 17-ka sano ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweyntii maanta lagu tilmaamay tii ugu weynayd ee loo sameeyo xul qaran muddo ka badan 20 sanno.
Raysal Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Wasiirka Isboortiga dalka,Maamulka gobolka Banaadir, masuuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo uu hoggaaminayo guddoomiye Ku xigeenka Cali Shiine, xubnaha guddiga fulinta xiriirka, cayaartoyda naadiyada kala duwan, tababarayaal,maamulka Isboortiga gobolka,garsoorayaal, guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo taageerayaal kor u dhaafaya 2-kun oo ruux ayaa buux dhaafiyay hareeraha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta C/qani Saciid Carab oo shir jaraa’id ku qabtay hotel Saxafi ayaa Yiri” Waxaan u mahad celinayaa Raysal Wasaaraha dalka,Wasiirkeena Isboortiga, Maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan shacabkeena oo si wayn inoo soo dhaweeyay.
“Guusha qaranka waxaa waqti ku bixiyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mana jirto cid kale oo garab inagu siisay ayuu hadalkiisa sii raaciyay C/qani Saciid Carab.
Waa uu sii hadlay Madaxwaynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya”Waxaan si qaas ah ugu mahad celinayaa Wariyaasha Isboortiga oo mar walba na garab taagan, waxaana ugu baaqayaa in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo dhiira-gallinta ay u sameenayaan ciyaartooyda.
Markii laga soo tago soo dhawaynta Ma jirin masuul ka tirsan Dowlada oo ka hadlay dib u soo laabashada ciyaartooydeena.
Xulka Soomaaliya ayaa si dirqi ah loogu qaaday koobka 17 sanno jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika markii Finalka aan wajahnay Tanzania.